Warsaxafadeed:Ha loo saro kaco badbaadinta Dalka & Dadka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
27th September 2015 MAREEG Af Soomaali 0
(Muqdisho, Axad, 27 Sept. 2015) Golaha Xisbiyada Soomaaliyeed oo ah gole ay ku bahoobeen inta badan xisbiyada dalka ka jira, shir ay maanta ku yeesheen Magaalada Muqdisho, ayaa ka wada hadla arimo ay ka mid yihiin xaalada dalku marayo, Madasha Wadatashiga Qaranka, Mooshinka ka yaala madaxweynaha, iyo aragtida Xisbiyada Soomaaliyeed ee ku aadan 2016.
1- XAALADA DALKA UU MARAYO
Golaha Xisbiayda Soomaaliyeed waxay dareemayaan in dalka Soomaaliya dhan kastaba uu marayo heerkii ugu hooseeyay mudadii 3-da sano ahayd ee uu xilka hayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, shacabka Soomaaliyeedna ay la soo daristay rajo xumo iyo niyad jab, madax banaanida iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed dhaawac weyn gaaray, taasoo ay sabab u tahay hogaanka Soomaaliya oo jilicsan iyo faragelinta shisheeyaha ee ciidan iyo siyaasad oo qaawan, inta damiirka lehna dareensiinaysa in dalkii uu ku socdo in uu gebi ahaanba ka baxo gacanta Soomaaliyeed uuna galo gacan shisheeye, arimahaasoo lagama maarmaan ka dhigaya in loo baahan yahay in shacabkeenu baraarugo.
2- MADASHA WADATASHIGA QARANKA (19-21-September 2015)
Golaha Xisbiyada Soomaaliyeed waxay u arkaan Madasha Wadatashiga Qaran mid aan ka mid ahayn Hay’addaha Dustuuriga ah, taasoo xadgudub ku ah dastuurka Federaalka, dalkana ku celinaysa Dawlad aan rasmi ahayn oo la mid ah xilligii ku meel gaarka ahaa ee laga soo gudbay iyo jahwareer siyaasadeed oo cusub. Xubnaha Madasha Wadatashiga Qaranka ka tirsan waxay u muuqdaan kuwo jilaya xiligii qabqablayaasha ee laga soo gudbay, Madashana waxay afduub cad ku tahay Hay’addihii Dustuuriga ahaa sida Golaha Wasiirada iyo Barlamaanka Federaalka ee sharciga ah.
Golaha Xisbiyada Soomaaliyeed wuxuu cadeynayaa in “Madasha Wadatashiga Qaranka” uu laalayo dowrkii shacabka Soomaaliyeed, Ururada Bulshada Rayidka ah, Xisbiyada Soomaaliyeed, iyo Aqoonayahanka ay ka qaadan lahaayeen horumarinta siyaasadeed, taa badalkeedana ay shisheeyaha ka soo qeyb galay shirka saameyn balaaran ku lahaayeen shirka iyo talooyinka ka soo baxaya, loona socdo in dalku gacanta u galo shisheeyo laguna hago talo shisheeye.
3- MOOSHINKA KA YAALA MADAXWEYNAHA
Golaha Xisbiyada Soomaaliyeed markay falanqeyn dheer geliyeen Mooshinkii Xildhibaanada, iyo qoraaladii isdaba jooga ahaa ee Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari ee ku aadanaa Mooshinka, waxaa noo muuqatay; in Gudoomiyaha Barlamaanku ku fashilmay hogaaminta Barlamaanka, isagoo cuuryaamiyay hab-socodkii howlaha Baralamaanka, isla markaana kala dhantaalay midniamadii iyo washaqeyntii xildhibaanada Qaranka ugu danbeyntiina wuxuu jabiyay dustuurkii iyo xeer hoosaadka Barlamaanka Qaranka.
4- Aragtida Xisbiyada siyasaadeed ee ku aadan 2016
Golaha Xisbiyada Soomaaliyee wuxuu diirada saaraya in siyaasadda dalka la horumaryo sanadka 2016, ayna suurta-gal noqoto in dalka uu ka dhaco isbadal siyaasadeed oo ku yimaada doorasho xor ah oo xalaal ah waxayna isala qaateen.
– In meel looga soo wada jeesto in aysan dhicin muddo kororsi lagu sameeyo Hay’adaha Dowladda, taas oo aan ku dhisneyn doorasho xor ah oo xalaal ah.
– In si ula kac ah loo hortaagan yahay Xeerka Xisbiyada, oo qabyo qoraalkiisii uu diyaar yahay, iyadoo farta aan ku fiiqeyno Golaha Wasiirada oo ugu horeeyo Xafiisyada Ra’iisul Wasaaraha & Wasiirka Arimaha Gudaha, sababtana ay tahay madaxda dalka oo aan rabin in horumar siyaasadeed uu dalkaan gaaro, iyagoo doonaya in ay dalka ku maamulaan rabitaankooda ah in ay xukunka si sharci daro ah isaga haystaan islamarkaasna cabsi ka qaba tartan xalaal ah oo ay la galaan xisbiyada Soomaaliyeed.
Waxan ugu baaqaynaa:-
In Barlamaanku, Mooshinka ka yaala Madaxweynaha qaab dustuuri ah u maamulaan, waqtina aan lagu lumen, waxaan gudoomiyaha ugu baaqeynaa in jahwareerka barlamaanka uu geliyay ka saaro, isagoo danta qaran fiirinaya.
2- AMISOM & Dalalka Deriska
Waxan ugu baaqeynaa in ay joojiyaan tacadiyada iyo xadgudubyada xuquuqul insaanka ee ay shacabka ku hayaan, waxanan diidanahay qaabka howlgalka ciidamada AMISOM uu u socdo iyagoo meesha ay qabsadaan dhimasho iyo dhaawac kadib sabab la’aan ugu baxayo. Waxan ku baaqaynaa in AMISOM la timaado Istiraatijyad ay dalka ugu baxayso, Dowladeenana la timaado qaabkii Ciidanka Qalabka Sida ay u la wareegi lahaayeen Amniga Qaranka.
3- Beesha Caalamka
Soomaaliya waa dal xor ah, oo ay leeyihiin dad xor ah kana baxay kumeel gaarkii, waxana lagu hayaa faragelin qaawan oo dhibaysa Danta Qaran(National Intrest); faragelinta waa mid ciidan, mid booob lagu hayo kheyraadka dabiicaga ee dalka iyo ku xadgub xuduudaha Dalka ee Badda, Berri iyo Hawadda sare, waxan ku baaqaynaa in la joojiyo sida ugu dhaqsida badan faragelintaas.
4- Xisbiyada Siyaasdeed & Shacabka Soomaaliyeed:
– In Xukuumadu u gudbiso Golaha Shacabka Xeerka Xisbiyada si loo ansixiyo sida ugu dhaqsida badan sida uu qabo Qodobka 22aad ee Dastuurka Soomaaliya.
– Waxa la joogaa xiligii loo midoobo lahaa si looga badbaado qataraha ku wajahan dalka & Dadka oo ay ka mid tahay faragelinta shisheeye iyo hogaamadan halista geliyay madaxbanaanidii Dalka iyo karaamadii Qaranka.